के शासकहरू जनताको मुख थुन्न सक्छन् ? – eratokhabar
के शासकहरू जनताको मुख थुन्न सक्छन् ?
राजु कार्कीलेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्
ई-रातो खबर २०७५, ३० भदौ शनिबार २१:२८ September 15, 2018 559 Views
बिहान उठ्नेबित्तिकै समृद्धिपथ राष्ट्रिय दैनिक खबर पत्रिका के हेर्न खोजेको थिएँ, मुख्य समाचार नै विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरीसहित चारजना कार्यकर्ता पक्राउ शीर्षकको समाचार पढेँ । किन पक्राउ गरिएछ ? उनीहरूले बम, बन्दुक पड्काएछन् कि ? मान्छे मार्ने उद्योग, अपहरण चोरी, डकैतीलगायत कुनै फौजदारी अपराध गरेछन् कि ? पढ्दै गएँ– इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाका अनुसार आरोपितहरूले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरिरहेको सूचनाका आधारमा गिरफ्तार गरेको भनियो । साथमा आरोपितहरूबाट त्यस पार्टीका पर्चा, पम्प्लेट तथा सदस्यता रसिदहरू फेलापरेको बताइयो । प्रहरी नायब उपरीक्षक थापालाई मेरो प्रश्न छ– के हो गैरकानुनी क्रियाकलाप ? कुनै पनि पार्टीको पर्चा, पम्प्लेट, सदस्यता रसिद बोक्दै हिँड्नु गैरकानुनी काम हो ? कि जनतालाई आफ्नो विचार राख्न रोक लगाउनु, प्रजातन्त्रमा विरोधको शान्तिपूर्ण र संवैधानिक स्वरहरूलाई कुल्चनु, आफ्नो आस्थालाई कुल्चनु, शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकारलाई रोक्नु, झूट्टा मुद्दा लगाएर थुनछेक गर्नु कानुनी काम हो ? एकपटक विश्वभरका संविधान र कानूनका ठेली पल्टाउनु पर्ला कि ?
थापा सर, तपाईंले भीमसेन थापालाई पढ्नुभएकै होला । तपाईं पक्कै पनि राष्ट्रियताप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ होला । कथित कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक दलाल, पुँजीवादी सरकार बनेदेखि राष्ट्रियता झन् कमजोर बनेको छ । झन् मधेसी राष्ट्रियताको त के कुरा ? राष्ट्रवादको नक्कली नाराभित्र सरकारले राष्ट्रघाती अरुण तीन आयोजना भारतलाई सुम्पिएको छ । सन् १९५० को सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत सन्धिहरूलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, कोसी उच्च बाँध, विमानस्थललगायत राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नेपालको सेना–प्रहरीको बेइज्जत हुने गरी भारतीय सुरक्षा व्यवस्थालाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ । भारतीय प्र.म. मोदीको नेपाल भ्रमणको बेलामा भारतीय सेनाले नेपालमा परेड खेलेको हाम्रो आँखाले देखेकै हो । भारतीय दूतावासले नेपालमा मनोमानी पाँच करोडसम्म लगानी गर्नसक्ने प्रावधानलाई ओली–दाहाल सरकारले अनुमति प्रदान गरेर नेपालमा भारतीय दूतावासलाई समानान्तर सरकार चलाउने छूट दिएको छ । यसले हाम्रो राष्ट्रियता र देशकै प्रतिष्ठा झन् गिर्र्दै गएको छैन र थापा सर ? दिनहुँजसो सीमा मिचिएको छ । सीमामा बस्ने नेपालीलाई भारतीय सीमारक्षकले गर्ने ज्यादतीको समाचार त सामान्यजस्तो हुन थालिसक्यो ।
जनताको विचार र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्ने अधिकार रक्षा गर्ने प्रश्न त धेरै टाढाको विषय भयो । संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टी र संस्थाहरूलाई समेत विरोध गर्न बन्देज लगाउन खोजिँदैछ । देशका बेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगारी दिने उद्योगहरू खोल्नु त परै जाओस्, भएका उद्योग र प्रतिष्ठानहरूसमेत बिक्री गर्ने, निजीकरण गरी एकाधिकार पुँजीपतिहरूको हातमा दिने काम भइरहेको छ । ओली–दाहाल सरकार गठन भएपछि चारपटकभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । चुनावमा लिएको खर्च उठाउन व्यापारीलाई मूल्यवृद्धि गर्न र कालोबजारी गर्न सरकारले छूट दिएको छ । कालोबजारियाको लँगौटी बनेको अवस्थामा चार सय प्रतिशतसम्म अन्यायपूर्ण कर थोपरिएको छ । कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा रहनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा माफियाकरण झन् बढेको छ । यो सरकार बनेदेखि विगतका सरकारहरूमा झैँ भ्रष्टाचार संस्थागत बनाइएको छ ।
जनजीविका साह्रै नै दयनीय बन्दै गएको छ । दलाली, भ्रष्टाचार र कालोबजारी गर्ने दिनानुदिन धनाढ्य बन्दै गएका छन् भने दिनहुँ मेहनत गर्ने, पसिना बगाउने, दिनदिनै गरिब बन्दै गएका छन् । महिनाभरि मेहनत ग¥यो, राम्रो खाना, लगाउन, छोराछोरी पढाउन धौधौ परिरहेको छ । ठूलै रोग लाग्यो भने त एक मात्र विकल्प हो मर्नु । त्यो हरेक मेहनतकश नेपालीको हो । थापा सर, तपाईं भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भने एकपटक आफ्नी श्रीमतीलाई सोध्नुहोला घरचलाउन कति गाह्रो छ ! एउटा स्वाभिमानी नेपाली पलपल मरिरहेको छ । एउटा नेपाली नागरिक आफैँले उब्जाउ गर्ने खेतमा मल हाल्नका लागि मल किन्न जान्छ, पाउँदैन । भर्खरै हुर्कंदै गरेकी छोरी बलात्कृत हुन्छे । दाइजो दिन नसक्दा सासू, ससुरा र लोग्नेको कुटाइ खानुपरेको छ । आजको युगमा बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाइन्छ । थापा सर, हामी कहाँनिर बाँचेका छौँ ? तपाईंकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने लाहान १५ बेतहाखोला ढोढनामा श्री आधारभूत विद्यालय छ । चार कक्षासम्म पढाइ हुन्छ एकजना सहयोगीको भरमा । अझ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र पनि उनैको जिम्मामा पर्लाजस्तो । त्यही गाउँमा ठूलो लगानी गरेर नेवाः संस्थाले खानेपानीको काम गरेको रहेछ । निर्माण सिद्धिएको एक महिनासम्म पनि धारामा पानी आएन । सबैभन्दा ठूलो समस्या सधैँ पसिना बगाउने पुर्खादेखि बस्दै आएको जमिन आफ्नो नहुनुको पीडा त छँदैछ । हेर्नुस् थापा सर, सत्यवतीनिर यो पङ्क्तिकार पुग्दै गर्दा जीवनमा कहिल्यै चामलको भात खान पाइनँ बाबु भन्दै आँसु झारेर मकैको ढिँडो पस्किएर दिएको मलाई अहिलेजस्तो लाग्छ । विष्णुपुरकट्टी मडायनमा श्री नन्दनी नि.मा.वि. छ । त्यस स्कुलमा प्र.अ. विद्यालय कहिल्यै आउँदैनन् । तर उनको हाजिर पूरै हुने गरेको छ– सबै स्थानीयले विरोध गर्दा पनि । पुलिस पट्टामा हावाले उडाएको घरको छानोका बारेमा सोचिदिने कसले ?
अर्कोतिर सामाजिक विकृतिहरू झन् धेरै बढिरहेका छन् । जुवा, तास, जाँडरक्सी सेवन, वेश्यावृत्ति, चोरी, डकैती, गुन्डागर्दी बढिरहेको छ । सार्वजनिक शिक्षातर्फ अधिकांश शिक्षक नियमित स्कुल नजाने, पठनपाठन नियमित नहुने, खेताला शिक्षक राख्ने, राम्रो शैक्षिक वातावरण र गुणस्तरीय शिक्षा त आकाशको फलझैँ हुँदै गएको छ । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरू छन् तर डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरू नियमित हुँदैनन् । अनुदानको औषधी बिक्री गरिँदैछ भने मिति सकिएका औषधीहरूसमेत बेचिँदैछ । छुवाछूत र छाडा क्रियाकलाप अद्यावधिक छँदैछ । अब भन्नुहोस् कहाँनिर छन् नेपाली जनता सन्तुष्ट ? विकृति बढ्यो, नगर्नुहोस्, रोक्नुहोस् भन्दै जनचेतना जगाउनु गैरकानुनी हो ? हो भने यस्तो विकृतिका विरुद्ध हजारपल्ट बोल्नुपर्छ, प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । त्यो मात्र देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली हो । यी आवाजहरूलाई रोक्ने कोसिस कहीँकतैबाट नगर्दा नै भलो होला कि ? नत्र शासकहरूलाई रामराम भन्न त सक्छन्, काँध हाल्न त सक्तैनन् नि ? चेतना भया ।
२०७५ भदाै ३० गते प्रकाशित
नेकपाद्वारा उदयपुर बन्दको घोषणा